धेरैपछि बन्यो आज यस्तो दुर्लभ संयोग, यी राशि बन्दैछन् मालामाल: राशिफल/२०७५ भाद्र ३१ आइतबार
वि.सं. २०७५ भाद्र ३१ गते आइतबार तदनुसार ई. सं. २०१८ सेप्टेम्बर १६ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, ने.सं. :– ११३८, (ञलाथ्व), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:४९ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:०७ बजे, इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:४१ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:५९ बजे, पोखरा, कास्की, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:५४ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:१२ बजे, भाद्रपद शुक्लपक्षको सप्तमी तिथि, साँझ ०६:३० बजेसम्म, त्यसपछि अष्टमी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, बिहान ०६:३२ बजेसम्म, त्यसपछि ज्येष्ठा नक्षत्र, चन्द्रमा बृश्चिक राशिमा (अहोरात्र व्याप्त), प्रीति योग, मध्यरात्रीपछि ०३:१० बजेसम्म, त्यसपछि आयुष्मान् योग, गर करण, साँझ ०६:३० बजेसम्म त्यसपछि वणिज करण, आनन्दादि योग : मृत्यु, चन्द्रवर्ण : रातो, चन्द्रदिशा : उत्तर, योगिनीदिशा : वायव्य, वारशूल : पश्चिम, आजको चाडपर्व र उत्सव : रविसप्तमी व्रत, भक्तपुरमा मंगलकुण्ड मेला, आजको मूहुर्त : रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा), द्रव्यप्रयोग वा लगानी, कलशचक्र,
आगामी ३ दिनभित्र पर्ने चाडपर्व र उत्सव तथा शुभ मूहुर्त : भोलिको चाडपर्व र उत्सव : अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा, आश्विन संक्रान्ति विश्वकर्मा पूजा, महालक्ष्मी व्रतको प्रारम्भ, श्री राधाजीको दिवस, विश्व वास्तु दिवस, कायाष्टमी, कागेश्वर मेला, भोलिको मूहुर्त : अग्निवास(होमादि), कलशचक्र, ०२ गते : अदुःख नवमी व्रत, मूहुर्त : रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा), कलशचक्र, ०३ गते : संविधान दिवस, मूहुर्त : अग्निवास(होमादि), कलशचक्र, युवा ज्योतिष सुजल श्रेष्ठ, ज्योतिष परामर्श केन्द्र पाटन दरबार, (भीमसेन मन्दिरको ४ घर उत्तर दिशा) ललितपुर नेपाल । सम्पर्क फोन नं. ०१ – ५५४२९५८, मोबाईल ९८४१७६३५५९ । सुरु गरौँ आजको राशिफल । शुरु गरौ आजको राशिफलबाट
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – परिस्थितिवश चिताएका काममा विलम्ब हुनेछ । कामको अलमल हुनेछ । केही संघर्ष गर्नुपर्ला । जिम्मेवारी बढिरहनेछन् । रोकिएका काम बनाउन सकिनेछ । काम रोकिनाले मन खिन्न हुनेछ । श्रमको मूल्यांकन अबश्य होला । पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्नेछ । टाढाका साथीभाइको निम्तो प्राप्त हुने समय छ । स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ । फाइदा उठाउने समय छ । ठूलो आवश्यकता पूरा हुनेछ । कर्जा लिनुपर्ने हुन सक्छ । प्रतिस्पर्धीहरूले अलि दुःख देलान् । काममा सहयोगको आशा देखाउनेहरूबाट धोका पाइने सम्भावना देखिन्छ । धेरै बोल्दा समस्या आउन सक्छ । योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला ।बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) – तपाईले जे बोल्यो त्यहि सबैले सत्य मान्ने छन् । पराक्रमद्वारा असाद्द्य कामहरु पनि बन्नेछन् । यदि नभएपनि हौसला कम हुने छैन । परिवारजनबाट टाढिनुपर्ला वा एक छिनको लागि छुट्टिएर सहयोग गर्नेहरू धेरै होलान् । सहयोग गर्ने भेटिनेछन् तर पनि सहयोग पाउन अली ढिला होला । रोकिएका काम धेरै नभएपनि सक्ने जति बनाउन सकिनेछ । कुनै–कुनै काम रोकिनाले मन खिन्न हुनेछ वा काम गर्ने मन लाग्ने छैन । बोलेर सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्नुहोला । यसो गर्नाले आज नभए पनि भोलि पर्सि तिर र आउने दिनमा कामहरुमा सफलता मिल्न सजिलो हुन्छ । अरूलाई प्रभावित पर्न मन हुनेछ वा अरु त्यति कै प्रभावित हुनेछन ।मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) – मठ मन्दिर जान पाइएला वा जान पाउने योजना होला । धर्म–कर्म गर्न सकिएला । तिर्थ यात्रा वा कुनै किसिमको भ्रमणको योग आउँदैछ । गरिब दुखीको सेवाको अवसर आउला । नयाँ काम फेला पर्न सक्छ । चुनौती पन्छाउँदै अघि बदना सकिनेछ । अवसरको खोजीमा भौतारिनु पर्ला । केही दौडधुप गर्नुपर्ला । संघर्ष गर्नु पर्ला । केही चुनौती देखिए पनि मनमा भएका जति पुरा गर्न नसक्ने नहोला । परीक्षामा नतिजाले उत्साह बढाउनेछ । आकस्मिक खर्च बढ्नाले मनमा चोट लाग्ला । दान पुण्य गर्न पाउनुहुनेछ । के खाउ के खाउ हुन सक्छ । किनमेलमा मन जानेछ । नसोचेको ठाउमा खर्च होला । रमाइलो दिनको सुरु भएको देखिन्छ ।कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) – धन सञ्चय वृद्धि हुनेछ । आफ्नो दाजुदिदिसँग भेटघाट वा जमघट हुन सक्छ । आफ्नो नातेदारसँगपनि भेटघाट वा जमघटको योग छ । कुनै संघ संस्था खोलौ भन्ने वा कुनै काम अघि बढाउ भन्ने हुनेछ । अलि कति रमाइलो वा खुसियाली जस्तो बढ्नेछ । रोजगारीको लागि व्यवस्थित बनौँउ भन्ने हुनेछ । कुनै संस्कृतिक पर्ब आदि आउन सक्लान । बिद्द्यार्थीहरुको लागि पढाई लेखाइमा जोड लगाएर पढ्नु पर्ने समय आएको छ । पेट लगायतका अंगको रोग भए अलि सन्चो होला । धेरै इन्टरनेट चलाउनु पर्ने काम आउला । साथी–भाइ दाजु–बहिनीहरु प्रत्ति निभाउनु पर्ने दायीत्व निभाउन सकिएला ।सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) –बिबिद संघ संस्थामा जानु पर्नेछ । ब्यावसायीक वा रोजगारको काम धेरै बढ्ला । घर– परिवार जनहरुबाट राम्रो–नराम्रो दुवै नै देखिन्छ । आमा लगायतका स्त्री विशिष्ट सम्बन्धहरुको विशेष याद आउला । यसो कतै नै जाने मन नलाग्ने हुनेछ । बाहिर गएर आउनु पर्नेमा बाहिर बाहिरै थन्किन सकिएला । वाहन, आदि किन्ने जस्तो कुरो आउन सक्ला । राम्रो राम्रो कुराहरु सुन्न सकिएला । दिनचर्या भ्याई नभ्याइ होला । सोचेको काम कुरा बनेर जानेछ वा सकाउनै पर्ने जस्तो होला । सफलताको सम्भावना बढेर आएको देखिन्छ । धेरै काम कुरा बन्ला योग सुरु भएको छ । केहि नभए पनि सानो २–३ वटा भएपनि कामहरु अबश्य बन्नेछ ।कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) – मनले चिताएको कुराहरु पुग्नेछ । जुन कुरा पहिले देखि सोचिरहेको थियो त्यो पुरा होला । ब्राह्मण देवता वा गुरु जनहरुको अर्शीर्वाद पाईएला । यात्राको अलि माहोल बनेको देखिन्छ । तर घुम्न नै पाइएला भने भन्न सकिन्न । इज्जत र सम्मान पाउनु पर्ने ठाउँ बाट मान सम्मान कम हुनेछ । आफ्नो भन्दा गन्ने सुन्ने मान्छेको कुराको दबदबा चल्नेछ । सानो होस् या ठुलो होस् केहि सम्मान भने अबश्य मिल्नेछ । ठुलो उत्सब समारोहमा खट्नु पर्ने हुन सक्छ । सम्मानीय जनको प्रेम पाईएला । शिक्षा पढाई लेखाइमा शुभ देखिन्छ ।तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) – नौलो नौलो परिस्थितीहरुको सामना गर्नुपर्ला । त्यसैले अली धपेटी जस्तो हुनेछ । खर्च लागे पनि दिगो फाइदा पछि होला । आकस्मिक खर्च बढ्नाले मनमा चोट लाग्न सक्छ । त्यसैले अलि सावधान हुनुपर्ने देखिन्छ । बोल्ने बानीले सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्नुहोला । मिहिनेत गर्दा अहिले नभएपनि पछि आम्दानी बढाउनेछ । रोग आदि भए त्यसको समाधान गर्न सकिएला वा काम गर्न सकिएला । आफ्नो सर सामान वाहन आदिको ध्यान दिनु होला किन कि मर्मत गर्ने समय आएको भए त्यसले अभर पार्नेछ । कुनै पनि बिग्रेको कुरालाई बनाउन सकिएला ।बृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) – बिन्दास रुपले दिन कट्नेछ । क–कसलाई नै पो भेट्ने हो भन्ने जस्तो हुनेगरी धेरैसँग भेटघाट हुनेछ । साथीहरुसँग भेटघाट गर्न पाइएला । घरग्रिहस्तीमा वा पारिवारीक जीवनमा राम्रो होला । कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग भेटघाट होला । भेटघाटको योजनापनि बन्नेछ । भबिष्यमा घुम्न जाने वा रमाइलो गर्ने बारेमा योजना बन्नेछ । काम बने पनि सन्तुष्टता भने ठिक ठिकै मात्र रहनेछ । जति कामहरु पुरा गरे पनि त्यस्तै जस्तो लाग्न सक्ला । त्यसैले काम वा धननै सब थोक होइन आराम र शान्ति पनि चाहिने भन्ने बिचार आउने हुन्छ । चाहिने भन्दा धेरै जोश र जागरले भरिभराउ होला ।धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) – प्रतिस्पर्धीहरूले समस्या निम्त्याउने हुँदा सतर्क रहनु होला । विवादास्पद कुरा वहन गर्नुपर्नेछ । अरूलाई प्रभावित पर्न मन हुनेछ । अरूलाई प्रभावित पारेर काम निकाल्न जान्नु पर्ने छ । बोल्ने बानीले दुःख पाइनेछ । विशेष योजना गर्नुहोला । जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनेछ । स्वास्थ्य प्रतिकूल बन्न सक्छ । केही चुनौती देखिए पनि मनमा भएजति योजना पुरा गर्न नसक्ने नहोला । कमजोरी सुधार्दै अघि बढ्दै जानु पर्नेछ । यदि नसुधारे आफैलाई गाह्रो होला । अरूको व्यवहारले शंका उब्जाए पनि मान्यजनको सुझावले गर्दा फाइदा हुनेछ । सहयोग गर्नेहरू भेटिनेछन् ।मकर (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) – प्रतिस्पर्धीहरूले समस्या निम्त्याउने हुँदा सतर्क रहनु होला । प्रयत्न गर्दा आउने समस्या समाधान हुनेछन् । मिहिनेतले आम्दानी बढाउनेछ । अरूको व्यवहारले शंका उब्जाए पनि मान्यजनको सुझावले गर्दा फाइदा हुनेछ । कामको अलमल हुनेछ । केही संघर्ष गर्नुपर्ला । जिम्मेवारी बढिरहनेछन् । घुमफिरको समय छ । रोकिएका काम बनाउन सकिनेछ । धेरै विद्युतीय उपकरण चलाउनु पर्ने काम आउला । ढाड लगायतका अरु अंगमा समस्या भए निको होला वा छिट्टै निको हुनेछ । धर्म कर्म, पुजा पाठमा मन होला । श्रम र बुद्धिको मूल्यांकन होला । पढाइमा प्रगति हुनेछ । सहयोग गर्नेहरू धेरै भेटिनेछन् । गीत गाउन वा गीत सुन्न मन भएर आउछ वा गाउन सुन्न पाइएला ।कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) – प्रयत्न गर्दा आउने समस्याहरुको सहजै समाधान हुनेछन् तर प्रयत्न जरुरी छ । राम्रो उपलब्धिको सम्भावना रहेको छ अलि गाह्रो जस्तो होला तर उपलब्धि मिल्न सक्नेछ । सहयोग गर्नेहरू धेरै भेटिनेछन् तर सहि तरिकाले काम गर्न जान्ने कमनै होलान । नयाँ कम्पनि, काम आदि खोल्ने विचार छ भने त्यस सम्बन्धित काममा अलि जोडले लाग्ने मन होला वा जोडले त्यसमा खट्नुहुनेछ । सानो सानो काममा लागि पर्दा राम्रो देखिन्छ । रमाइलो जमघट हुने जस्तो बातावरण देखिन्छ । पशुपालन तथा कृषि क्षेत्र राम्रो देखिन्छ किन कि त्यसमा सुधारहरु ल्याउन सकिएला ।मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) – मेहनत गर्दा मात्र अलि बढी सफल होला किन कि काम बन्न अलि संघर्ष गर्नु पर्ला । दैनिकी अलमल हुनेछ । पूर्व तयारी भए सजिलो होला । तपाइलाई उन्नतीले पछ्याएको छ । शैक्षिक चाजो पाजो आदि मिलाउने कामहरुमा वृद्धि हुन सक्छ । नाती नातिनाको सुख दुखमा सम्मिलित हुन पाइएला । ठुलो ठुलो काममा भन्दा सानोमा मन होला । अरुले इज्जत गर्नेछ । सम्मान गर्नेछ र गन्ने सुन्ने मान्छेले समेत प्रशंसा गर्नेछन् । लेख्ने पढ्ने काम बढ्छ तर केहि अबरोध भने आउछ । हिम्मत बढ्ने छ । आफ्नो सहकर्मीको माया बढ्नेछ ।